'Troutbeck' kwiNdlela yeengxangxasi - I-Airbnb
'Troutbeck' kwiNdlela yeengxangxasi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLesley
I-cottage ifanelekile kwizibini, abantu abahambahambayo, kunye neentsapho ezifuna ukubuyela kwindalo ngaphandle kokuzibhokoxa.
I-Troutbeck Cottage yindawo yakho yabucala ebekwe kwibhloko enkulu efana nepaki entliziyweni yelali enoxolo. Ipropathi ibonakalisa uluhlu lwemithi emihle esekiweyo etsala intaphane yezilwanyana zeentaka.
Isetiyelwe phezu kweGreat Dividing Range ecaleni kwendlela entle yeWaterfall, ilali yase-Ebor yenye yezona ndawo ziphakamileyo ezibekwe ngaphandle kommandla weAlpine.
I-cottage yindawo ekhululekileyo, umlilo weenkuni ubonelela nge-ambience epholileyo ngelixa iziqwenga zangoku kunye nezakudala zinika imbeko kwisitayile sekhabhinethi yeentaba kunye nengaphandle enkulu. Hlala emva kwizitulo zakho ze-Adirondack kwiveranda yamatye kwaye uthathe umoya weentaba kunye nohlaza. Ebusika kupholile phambi komlilo ngewayini kunye nengubo yefleecy. Kwaziwa ngokuba likhephu e-Ebor.
I-cottage inazo zonke izinto ezibandakanyiweyo onokuzilindela kwihotele efanelekileyo, i-cotton bedding kunye neeseti zethawula, isepha ye-eco, i-hairdryer, isinyithi, kunye nekhitshi epheleleyo kunye neendawo zokuhlamba iimpahla. Kukwakho nebhedi yosana kwisiza.
Ikwanayo nomabonakude wesathelayithi, umatshini wekofu wekofu kunye nezinye izinto ezincinci ezongezelelekileyo njengeencwadi zetafile yekofu kunye nokujula iiragi kunye neecushion ukongeza ukubanjwa kobunewunewu obutofotofo.
Kukwakho noluhlu lweeti ezintle kunye neepods, kunye nezinye izinto eziluncedo zepantry njengeoyile yomnquma ukuze uqalise.
I-Troutbeck Cottage ilula ukuhamba umgama ukuya kwiingxangxasi ezidumileyo zase-Ebor ecaleni kwendlela entle (kwaye etywiniweyo) yepaki yesizwe yokuhamba, uMlambo iGuy Fawkes kunye nekhefi yelali kunye ne-retro pub (iingcango ezimbini ezantsi).
Ngokuqinisekileyo ubungcali be-Ebor kukuloba iitrout kwaye kukho intlaninge yemilambo ukuziqhelanisa nomsebenzi wakho wokuloba ngexesha lokuloba ngo-Okthobha ukuya kuJuni. Ke ngumcimbi nje wokuzisa ikhaya lakho elihle kwaye upheke isidlo kwi-barbecue ye-cottage.
Ehlotyeni ngqina imiboniso emihle yee-daisies zasendle ze-Shasta kwilali yonke nakwiindawo ezingqonge i-Guy Fawkes River National Park kwaye ekwindla iiorenji ezidlamkileyo kunye nobomvu beendlela zayo zemithi evuthulukayo.
Ilali yase-Ebor imi kwimizuzu engama-40 ukusuka kwidolophu ekhangayo yeentaba yaseDorrigo kunye neepaki zelizwe ezililifa lehlabathi kunye ne-skywalk. I-hip kunye ne-Bellingen 'Bello' yinto eqhubekayo ye-20mins phantsi kwendlela ukusuka apho. Isixeko esiyimbali saseNew England saseArmidale sikwangaphantsi kweyure yokuhamba ngemoto.
4.85 · Izimvo eziyi-171
Yindawo enoxolo kunye nomoya welali onobubele. Umoya opholileyo, omtsha kunye nobuninzi bendalo kwiindidi zayo ezahlukeneyo zozuko.
Akukho ukusebenzisana ngokomzimba kodwa kukufowuna kuphela kude. Kukho umgcini wepropathi okhoyo ukuba azimase kwimeko kaxakeka.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-25170
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ebor